Dhaq-dhaqaaqyo culus oo ka billowday duleedka Guriceel – Maxaa soo kordhay? | Dalkaan.com
Home Warkii Dhaq-dhaqaaqyo culus oo ka billowday duleedka Guriceel – Maxaa soo kordhay?
Guriceel (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xalay, illaa saaka dhaq-dhaqaaqyo culus oo iska soo horjeedo ay ka bilowdeen deegaano hoostaga magaalada Guriceel oo ay dhowaan qabsatay Ahlu Sunna Waljamaaca.
Galmudug ayaa xoojisay abaabulka dagaal ee ka socda gobolka Galgaduud, isla-markaana lagu wajahayo Ahlu Sunna, si dib looga saaro magaaladaasi.
Wararka ayaa sheegaya in saaka ciidamadii ugu badnaa oo wata gaadiidkooda dagaalka ay ka baxeen magaalada Dhuusamareeb, iyaga oo gaaray deegaanka Ceeldheere, halkaas oo ay ka sameysteen fariisimo ciidan, iyaga oo ku biiray ciidamo horey ugu sugnaa halkaasi.
Ciidamadan ayaa qayb ka ah gulufka dagaal ee ay Galmudug ku wajahayso Ahlu Sunna oo dib ugu soo rogaal celisay deegaanada maamulkaasi.
Dhinaca kale ciidamada Ahlu Sunna ayaa dhankooda dhaq-dhaqaaqyo ka wada magaalada Guriceel, waxaana heegan la geliyey askarta ku sugan gudaha magaaladaasi.
Dadka deegaanka ayaa dhanka kale lagu soo warramayaa inay bilaabeen barakac xoogan, waxaana soo wajahday cabsi ka dhalatay dhaq-dhaqaaqyada ay wadaan labada dhinac.
Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan dhaq-dhaqaaqyada haatan u socda ee u dhexeeya ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana markasta laga cabsi qabaa in dagaal uu qarxo, maadaama labada ciidan y xoojiyeen abaabuulkooda dagaal.
Previous articleXog: Al-Shabaab oo weeraro u qorsheysay MUQDISHO + Goobaha la beegsan karo
Next articleMaxay tahay aragtida gar-yaqaanada Soomaaliyeed ee go’aankii Maxkamadda ICJ?
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Marib (Caasimada Online) – Ugu yaraan 100 isugu jira mucaaradka Yemen iyo ciidamada dowladda taageersan ayaa 48-kii saac ee tegay lagu dilay dagaal sii...
Xiisadda Masjidka Quba ee Soomaalida Amsterdam oo dib usoo laabatay +...
Xildhibaan ka tirsan Somaliland oo dhagax lagu dhaawacay + sababta
Uhuru oo jawaab ka bixiyey go’aankii ay Maxkamadda ICJ ka gaartay...
Wararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay Kismaayo